fitaterana mivondrona ao amin’ny Union des Coopératives des Transports Standarisés ary
andraisan’ny CNaPS an-tànana ny fiahiana ara-tsosialin’ireo mpamily sy ny mpanampy.
ampidirana mpikambana ao amin’ny CNaPS ireo mpamily, ny mpanampy azy, ny tompona fiara
mba hisitraka fiahiana ara-tsosialy. Maro ny tombony ara-toe-karena azo vokatr’ity fiaraha-miasa ity satria dia azo arahi-maso ireo fiara amin’ny alalan’ny GPS, ary mahazo fihenam-bidy izy ireo amin’ny tranom-piantohana. Tombony ho an’ny mpandeha kosa ny tsy fahafahan’ny fiara fitaterana miverin-dàlana. Ary tombony ho an’ny mpamily sy ny mpanampy azy ny fahazoana fisotron-dronono rahatrizay tonga ny fahanterana ary raha sanatria ka tra-doza amperin’asa izy ireo dia ny ambulancen’ny CNaPS no hitatitra azy hankany amin’ny hopitaly ary handray an-tànana ireo mpandeha maratra ka mpikambana feno sy ara- dalàna ao amin’ny CNaPS. Ny fitaterana eto amin’ny manodidina an’Antananarivo na suburbaine no hanombohana ity hetsika ity